Fikarohana momba ny firaisana Terry Smith, izay maty tany amin'ny WW I fony ny British Ship Hood dia nangatsiaka tamin'ny tafika an-dranomasina Alemanina dia nanoritsoritra ny zavatra niainany any an-danitra, saka Telepathic ary komity mankasitraka - Fikarohana Reincarnation
Terry Smith, izay maty tany amin'ny WW I fony ny Ship Hood anglisy dia nangatsiaka tamin'ny tafika an-dranomasina Alemanina, dia mamaritra ny zavatra niainany any an-danitra, saka Telepathic ary ny komity mirary
Terry Smith dia manoritsoritra ny fahatongavany ao anatin'ny Sink of the Warship Hood sy Arrival ao amin'ny tontolon'ny fanahy na lanitra
Tamin'ny fotoam-pitsarana iray izay natao tamin'ny Jolay 16, 1966, nisy feo iray nanam-peo lahy izay nanambara ny maha-izy azy hoe Terry Smith. Nilaza izy fa notsofina sy maty izy rehefa nisy akorandriaka iray avy amin'ny ady alemà Bismarck nilentika ilay sambo mpiady Britanika Hood amin'ny rano mangatsiaka any Atlantika Avaratra
“Tampoka teo dia niseho tampoka izany. Tsy nisy na iray aza tena nanana tranga. Tsy nisy fanantenana izany. ”
Betty Greene: “Terry, azonao atao ny milaza ny fihetsikinao taorian'ny nahafatesanao? Inona no nanjo anao?"
“Ny zavatra voalohany tadidiko dia niakatra an-dalambe. Làlana tsy mbola fahitako hatramin'izay. Tsy tsapako tamin'ny voalohany fa tsy arabe tena izy io. Nahasarika azy rehetra izy io. Hazo mahafinaritra amin'ny lafiny rehetra sy trano mahafinaritra. Betsaka ny tranobe kely mirenireny etsy sy eroa, ary misy trano lehibe kokoa, ary tena mahaliana azy io. Tsy fantatro ilay toerana, ary toa tsy nisy toerana, angamba tany Kalifornia. Nahita sary misy karazana boulevards misy hazo aho, mitsangantsangana ary trano kely tsara tarehy. Tsy vitako ny manao loha na rambony.
Tsy nisy olona hafa momba azy. Toy ny hoe teo daholo irery aho. Nihevitra aho fa hafahafa izany. Nihevitra aho angamba hoe nanonofy aho. Tsy dia somary tsy dia mahazatra loatra ny lalana, kanefa misy zavatra momba izany izay nanome ahy fahatokisan-tena anaty. Tsy feo akory dia fantatrao. Na inona na inona.
Terry no manome ny fitarihany ny fanahiny amin'ny fiainana any ankoatra, izay manolo-tena azy
Avy eo rehefa tonga lavitra aho dia nahita tovovavy mahafatifaty, vehivavy tsara tarehy, angamba 28 na 30 taona, nijoro teo am-bavahady kely. Io no trano voalohany nisy vavahady, ny hafa rehetra toa tsy nisy vavahady
Na izany na tsy izany, ity vehivavy antitra kely ity - ny zavatra mahatsikaiky momba azy dia toa tanora izy, kanefa tsapako fa antitra izy. Niankina tamin'io vavahady io izy, ary rehefa tonga tany aminy aho dia nitsiky. Nijanona aho dia hoy izy: 'Mitady zavatra ve ianao ry sonny?'
Hoy aho hoe: 'Tsy fantatro loatra izay mitranga na aiza aho.'
'O!', Hoy izy, 'tsy mety, anaka, efa niandry anao aho. Mandrosoa.'
Nieritreritra aho hoe: 'Eny, tsy misy na inona na inona ho very aho, ka hiditra aho.' Farafaharatsiny mba misy olona iresahana.
Nentiny teo anoloana aho, angamba ataoko hoe antsoinao io ilay efitrano kely, efitrano kely tsara izany, misy ambainy sy seza mahafinaritra, ary toa tena feno trano io. Ary nisy saka iray nipetraka teo amin'ny seza iray. Saka mainty saka. Nieritreritra aho hoe, "saka?" Tsy mety maty amin'ny saka aho.
Hoy izy: 'Avia Sonny, mipetraha.' Dia nipetraka teo amin'ny seza hafa aho tsy misy saka ao.
Cat iray any an-danitra miteny amin'ny tele
Tampoka teo dia nanao zavatra mahatsikaiky indrindra ity saka ity. Nitsambikina avy eo amin'ny sezany izy ary nanatona ahy, nipetraka teo amin'ny tongony aoriana ary niandrandra ahy, nanakorontana ny sofiny ary tsy nibontsina izy, tsy nitabataba toy ny saka, fa toy ny hoe niteny ilay zavatra. Fantatrao ve fa saika nilatsaka aho? Nihozongozona mafy aho.
'Oh. aza matahotra, 'hoy izy. 'Hanao izay ianao. Ny biby eto an-tany dia nitombo tamin'ny fahaizan'izy ireo hahatakatra ny momba azy ireo. Mazava ho azy, eto an-tany amin'ny fomba ahafahany manao izany, saingy tsy mandre azy ireo hiteny isika satria tsy mahay fiteny araka izay takatsika azy. Fa eto ambonin'izany dia ny eritreritr'izy ireo dia afaka manidina ny rivotra mba handrenesanao ny feo. Ny eritreritr'izy ireo fotsiny no nampitaina taminao mba hahafahanao mandre azy ireo. '
Hoy ity saka ity: 'Manao ahoana ianao?'
Nieritreritra aho hoe: 'Nataon'i Christ ity adala ity. Tsy miteny ny saka hoe manao ahoana ianao? ' Tsy hitako izay hatao, inona no holazaina.
'Aza manahy,' hoy izy. 'Hanao izay ianao. Ny biby dia mora tohina noho ny tsapan'ny olona ary manana ny fahalalany manokana zavatra. Azon'izy ireo atao ny mampita eritreritra sy maka hevitra, ary efa zatra ny biby afaka mitondra zavatra betsaka kokoa avy amin'ity lafiny ity izy ireo ka afaka mivoaka eto an-tany. '
Somary nahitsy tamin'ny hevitra aho ary nilaza hoe: 'Tsara izany, misaotra.'
Ary toy ny nilaza ilay saka hoe: 'Manantena aho fa ho sambatra eto ianao.' Niverina izy ary nipetraka teo amin'ny seza, nikorisa dia natory.
Ny namako dia nilaza tamiko ny anaran'ny saka fa i Nelly, izay nomen'ny reniny ny saka.
'Ny reninao? Hoy aho. 'Firy taona ity saka ity?
'Ity saka ity,' hoy izy, 'dia tokony ho amin'ny vanim-potoana ara-nofo, sahabo ho enimpolo taona eo ho eo.'
Ny torolalan'ny fanahin'i Terry dia mampahafantatra azy fa maty Izy
Hoy izy avy eo: 'Te-hisotro zava-pisotro ve ianao?'
Ka hoy aho hoe: 'Eny, tiako.'
Dia nanontany izy hoe: 'Inona no tianao?
Dia hoy aho hoe: 'Mila voasarimakirana aho.'
'Ianao ve? Tsara izany.' Ka dia lasa izy ary niverina niaraka tamin'ny voasarimak'i vera. '
'Fantatrao fa tsy misy tokony atahoranao ry sonny,' hoy izy. 'Efa niandry anao aho.'
Tsy fantatro izay holazaina. Nipetraka teo aho, ary hoy izy: 'Fantatrao fa maty ianao.'
'Alefaso io. Tsy maty ny nipetraka tao anaty efitrano misy saka iray teo aho ary nisotro voasarimakirana iray. Ary ny mafy orina sy tena ampy. Ahoana no ahafahako maty? Ekeko fa somary hafahafa ihany izany. '
Tamin'ny voalohany dia nieritreritra ny hanonofy aho na zavatra.
'Tsy manonofy izany, anaka,' hoy izy. 'Maty ianao.'
'Ka raha hoy ianao hoe maty aho, ahoana no nahatongavako teto?'
'Nisaintsaina anao sy nivavaka ho anao aho ary nomena anao ny andraikitra.'
'Inona no tianao holazaina fa nomena ahy ianao?'
'Eny,' hoy izy, 'Rehefa midina ny sambonao…'
Ary tampoka teo aho. Rehefa nidina ny sambo. Ny zavatra tadidiko farany dia tany anaty rano nitazona bara hazo iray. Fomba fisainana mety hahazaka izany, saingy mazava ho azy fa tsapako fa tsy misy fanantenana izany.
'Maty ianao', hoy izy.
'Misy tony an-jatony maro,' hoy izy, 'tonga.'
'Eny, ary izy rehetra dia samy nahazo olona hikarakara azy ireo. Ny sasany dia manana ny fireneny, ny fifandraisany ary ny namany. Ny sasany dia manana fanahy hafa, ary izaho no mpitondra anao, 'hoy izy.
Terry Telepathically dia nitarika azy hihaona amin'ny torolàlana ara-panahiny
'Tsy tena tsapanao izany, fa ianao kosa nitarika anao. Nihevitra ianao fa ianao irery no mandeha amin'ny lalana. nefa tsy izany ianao. Nanampy aingam-panahy avy amin'ny fanahy iray ianao izay miasa amin'ny fanampiana ny olona rehefa tonga tampoka toa anao. '
'Eny, tsy azoko izany rehetra izany.'
'Aza manahy ianao', hoy izy. 'Mijanona amiko ianao. Hikarakara anao aho. Ho toa ny reninao aho. '
Nieritreritra aho hoe: 'Eny, zavatra izany.' Ary nanomboka niresaka momba ny oloko izy. Nihozongozona ahy izany, satria toa fantany ny momba ny reniko sy ny raiko, ary ny fomba fisarahan'izy ireo misaraka, ary momba ny rahavaviko momba ahy, dia hoy aho: 'Misy ifandraisany aminay ve?'
Hoy izy: 'Tsy tena izy, fa anjarako ny mahafantatra zavatra momba ny olonao, tahaka ny fikarakarako anao.'
'Eny, mampihomehy izany' hoy aho. 'Satria milaza ianao fa vao avy nandalo fotsiny aho, ahoana no hahafantaranao ny anjarako?'
'Oay, tsy sarotra izany. Fa resaka fotsiny ilay izy. '
'Midira ao', hoy aho. 'Feo toa ny tariby.'
'Tsara tokoa izany, hoy izy. 'Raha manana antony manokana te-hahafantatra momba ny olona iray na olona manokana isika, ary asa manokana tsy maintsy ataontsika izany, ary efa misy karazana fifandraisana isika, izay ilaina ho antsika hahalala zavatra. Midira izahay. Rehefa afaka kelikely dia tsy hahita ny olonao izahay. '
'Oh, tsara izany.'
Terry's Spirit Guide dia mampahafantatra azy fa afaka mitsidika sy mijery ireo havany eto an-tany izy
'Mazava ho azy fa fantatrao fa tsy hahafantatra ny matyo izy ireo. Ny tiako holazaina dia tsy ho fantatr'izy ireo fa eo ianao. Ho fantatr'izy ireo fa maty ianao, nefa tsy ho fantatr'izy ireo fa mbola velona ianao, afaka mandinika azy ireo ianao na mandeha ary hahita azy ireo. Tsy tezitra be ianao raha tsy misy mahatsikaritra anao. '
'Oh welI,' hoy aho. 'Nanana nenitoana ara-panahy aho.'
'Oh! Tsara izany', hoy izy. 'Angamba afaka mahazo zavatra iray isika amin'izany. Tsy hainao mihitsy. Mila manandrana azy isika.
Mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy manandrana mianina eto ianao. Manan-janaka lahy eto an-tany aho ary manantena indray andro any rehefa tonga eto izy fa hiaraka indray isika. Manantena aho fa hanao izany isika. Fa mandritra izany fotoana izany, hikarakara anao aho toy ny hoe zanako lahy ianao. Hanao izay vitako ho anao aho ary ezaho atao izay hahasambatra anao. Tsy manahy ianao, ary tsy tokony hahatsapa ho irery na zavatra toy izany.
Fotoana kely taty aoriana, rehefa miala sasatra ianao - mieritreritra aho fa tokony hiala sasatra: somary nanaitra anao izany rehetra izany – hoentiko ianao hivoaka ary hampahafantarina anao ny karazan'olona mahaliana rehetra eo amin'ny fiarahamoninay. . '
Jiro any an-danitra nateraky ny masoandro
Fotoana kely taty aoriana dia nitondra ahy nivoaka izy, ary izay toa ny masoandro – na dia nilaza tamiko aza izy taty aoriana fa tsy misy masoandro, izany dia fanazavana izay azontsika rehetra, ny fiainana rehetra no nanovo hery… Mampihomehy momba ity ny fahazavana-dia toa hafahafa izany-saingy toa tsy natsipy tao anaty aloka marivo. Raha ny fahitako azy dia toa mamirapiratra mahafinaritra ny zava-drehetra nefa tsy masiaka, ary toa tsy ilaina ny miala amin'ny hazavana, satria nahafinaritra sy nahafinaritra tokoa ilay jiro, ary tsy ilay nolazainao hoe mafana. Tsy nahatsiaro ho toy ny mandoro anao ianao, na izany aza dia hafanana mahafinaritra.
Na izany aza, nivoaka izahay, niaraka niaraka taminy. Ary dia notarihany ny varavarana. 'Hanidy ny varavaranao ve ianao??'
'O, tsy misy ilana anao eto izany fantatrao.'
Nolazaiko taminao rehefa tonga teny amin'ny làlana voalohany aho toa tsy nisy na inona na inona ilay toerana. Toy ny tanàna maty izy io, tsy nisy olona mihitsy, ary toa marefo sy madio ary vaovao ny zava-drehetra toa ny hoe lasa nandeha tamin'ny fitsangatsanganana antoandro ny rehetra.
Komitin'ny fandraisana olona any amin'ny fiainana any an-danitra na any an-danitra
Amin'ity indray mitoraka ity dia toy ny hoe nivoaka ny olona rehetra, nijanona teo am-baravarana, na nidina ny lalana. Soa ihany aho fa mbola tsy lasa lavitra teny amin'ny làlana alohan'ny nanodidina ahy ny olona - ny ankamaroan'ny tanora. Ny iray na roa dia toa efa antitra, ary na dia niherika izany aza aho dia hitako fa tsy antitra izy ireo, saingy nisy zavatra momba azy ireo nilaza fa misy taona, nefa tsy toa antitra. Tsy azoko hazavaina izany.
Na izany na tsy izany dia nohohazin'izy ireo daholo aho ary niantso ny anarako. Nieritreritra aho hoe, hafahafa, hafahafa, mahalala ny anarako ny olona rehetra ary miantso ahy hoe Terry ny olona rehetra toy ny hoe nahafantatra ahy ny androm-piainan'izy ireo.
Tsapako taty aoriana fa kely dia kely ny zavatra afa-mandositra azy ireo raha misy olona vaovao tonga ao amin'ny fiarahamonina, na olona vaovao maro tonga avy amin'ny Tany.
Hitako taorian'io dia vondrom-piarahamonina manokana izay ny asany dia ny manampy ny vao tonga sy mitarika azy ireo. Ary miaraka amin'ny ady dia betsaka ny tanora tonga. Na eo aza izany, teo akaikiko daholo izy ireo ary nahatonga ahy hahatsapa ho tsara, ary tena nahatsapa ho toy ny teo amin'ireo namako taloha aho.
Nieritreritra aho hoe: 'Hafakely ity. Ity aho tonga tany amin'ny toerana izay toa maty sy tsy teo ny rehetra, ary tsy nisy nanelingelina. Ary izao dia toy ny hoe eto daholo izy rehetra, mivoaka hitsena ahy daholo. Nanontany ny namako àry aho. ”'Fa maninona aho no tonga tsy tonga olona hitsena ahy rehefa tonga aho?'
'O!', Hoy izy. 'Niniana izany.'
Tena nilaina tokoa izany. Nilainao ny nankanesanao taty amiko satria izaho no voafidy hikarakara anao. Ny hafa mahalala, mazava ho azy, ny fahatongavanao. Ary ny trano rehetra nandalovanao, na dia tsy nahita olona aza ianao, dia matanjaka be ny fitiavan'izy ireo ka nanampy anao. Fantatr'izy ireo fa ho avy ny fotoana mety rehefa nanamboatra ny tenanao ianao ary nanampy ahy hahita sy hahatakatra kely ianao. Avy eo dia ho vonona handray anao bebe kokoa amin'ny olona maro ianao. Raha teo daholo izahay dia ho be loatra aminao.
Milamina ianao izao, mifankahalala amin'ny olona, ​​ary ny zavatra manaraka dia ny mahita anao ny karazana asa tianao hatao. '”